Fianarana GIS 9 mifantoka amin'ny fitantanana ny harena voajanahary - Geofumadas
Jolay, 2015 Fampianarana CAD / GIS, jeospatial - GIS
Ny fanolorana fiofanana an-tserasera sy mivantana amin'ny fampiharana Geo-Engineering dia be dia be ankehitriny. Anisan'ireo tolo-kevitra marobe misy, anio dia te-hanolotra taranja miavaka sivy farafahakeliny izahay miaraka amina fomba fitantanana loharanon-karena voajanahary, avy amin'ireo orinasa telo miaraka amina tolotra fiofanana mahaliana.
Ivon-toerana momba ny tontolo iainana
Ny ISM dia manana fahaizana manokana sy fahaiza-manao miavaka amin'ny lohahevitra, noho izany ny fampianarana azy dia mifantoka amin'ny fitantanana ny harena voajanahary. Manana mari-pahaizana Master momba ny fitantanana tontolo iainana mihitsy aza izy ireo.
Mahaliana ny lesona:
1. Ireo rafitra ara-jeografika momba ny jeografia dia nampiharina tamin'ny tontolo iainana
2. Famoronana sari-kartographie
3. Fampiharana ny GIS amin'ny Litorial sy ny Marine Studies
Fanampin'izany, ny tolotra nataony dia ahitana ireto manaraka ireto:
Fampiharana mahomby amin'ny GIS momba ny siansa momba ny taha-tany
Fampiharana fampiharana ara-jeografika amin'ny toekarena
AutoCad ho an'ny teknolojia momba ny tontolo iainana
Ny firafitry ny flora sy ny biby amin'ny teknolojia GIS / GPS.
Ireo dia miandraikitra ny Geosolucions, orinasa iray miorina ao Andorra.
Ireo fiofanana ireo dia mifantoka amin'ny famolavolana sy ny fitantanana ny rano, ho an'ny famatsiana sy fanadiovana.
1. Famolavolana ny fanadiovana sy ny tambajotran-draharaham-panjakana amin'ny Giswater
2. Famolavolana tambajotram-pitrandrahana rano fisotroana miaraka amin'i Giswater
3. Fampidirana ny famolavolana ny fanadiovana sy ny tambajotram-pampielezam-paritra miaraka amin'ny EPA SWMM
Anisan'izany ny tolotrareo:
Ireo rafitra fampahalalana ara-jeografia amin'ny QGIS dia nampiharina tamin'ny Giswater
Ny rafitra fampahalalana ara-jeografia dia ampiharina amin'ny fitantanana ny tanàna
Fampianarana amin'ny sehatra ara-jeografika miaraka amin'ny QGIS
Raha sendra ny Geo-Training, raha milaza ny fehezan-dalàna mifidy GEOFUMADAS ianao, dia hanana fihenam-bidy an'ny 20% amin'ny sehatra rehetra atolotry ny orinasa.
Ity orinasa ity dia manana tolotra maherin'ny 40, amin'ny fomba maoderina manampy ary koa mizaka tena antsoina hoe Geoplay. Ny fianarany dia samy manana rindrambaiko maimaimpoana sy fananana.
Anisan'ireo hevi-dehibe ireo:
1. GIS dia nampiasa ny mpampiasa ny Territory
2. Fianarana ambony kokoa amin'ny GIS. Manokana amin'ny fitantanana Hydrological
3. Mazava ho azy fa amin'ny GIS. Tombontsoa manokana momba ny fitantanana ny fiainana dia
Ho an'ny santionan'ny tolotra Geoinnova dia afaka miresaka isika:
Fampianarana manokana momba ny GIS any amin'ny faritra sy ny tontolo iainana voajanahary
ArcGIS 10. Fitantanana ny karazana sy habaka voajanahary voaaro
Maxent sy ArcGIS. Modely azo tsapain-tanana momba ny fizarana karazana, niches ecological ary fifandraisana amin'ny alàlan'ny teknolojia GIS.
Raha fintinina. Tolotra mahaliana ho dinihina rehefa mitady fomba hafa fanofanana.
Previous Post«Previous Isa mangatsiaka avy amin'ny Top 40 Geospatial ao amin'ny Twitter
Next Post AutoCAD 2016. Faran'ny fahazoan-dalana mandrakizay.manaraka »
Valiny iray ho an'ny "Cour GIS 9 miompana amin'ny fitantanana ny harena voajanahary"
Jelena Spasojevic hoy izy:
Desambra, 2019 ao
da li moze da se code vas pohadja individualno kurs GIS-a i koja bi rehefa hisakafo hariva?